nepbizinfo.com | शिवम सिमेन्टको प्रिमियमवाला आइपीओ बिक्री खुलेको छ, हेर्नुहुन्छ कि भर्नुहुन्छ !
शिवम सिमेन्टको प्रिमियमवाला आइपीओ बिक्री खुलेको छ, हेर्नुहुन्छ कि भर्नुहुन्छ !
काठमाडौँ २०७५ फाल्गुण ७: शिवम सिमेन्टले गत असार-श्रावन महिनामा उद्योग क्षेत्र मकवानपुरका स्थानीयलाइ अंकित मुल्यमा रु. २०० प्रिमियम थपेर प्रति शेयर रु.३०० मा जारी गरेको आइपीओ १३ प्रतिशत मात्रै बिक्री भएपछि आइपीओको मुल्य महँगो भयो भन्दै अन्डरराइटर पछि हट्दा सर्वसाधारणलाइ बिक्री गर्ने आइपीओ ७ महिना पछि मात्रै बिक्रीमा आएको छ। कम्पनीले सर्वसाधारणलाइ बिक्री गर्ने शेयरको मुल्य पूर्वनिर्धारित मुल्य रु. ४०० बाट घट्दै रु.३०० कायम गर्ने भएपछि बल्ल आइपीओ निष्काशनमा आएको हो । कम्पनीको शेयरलाइ एनआइबिएल एस क्यापिटलले अन्डरराइट गरेको छ ।
शिवम सिमेन्टले जारी पूजी ४ अर्ब ४० करोडको १२ प्रतिशत अर्थात् रु. ५२ करोड ८० लाख बरबरको ५२ लाख ८० हजार कित्ता शेयरमा स्थानीय र सर्वसाधारणलाइ छुट्टाछुट्टै प्रिमियम जोडेर निष्काशन बिक्रीमा लाएको छ । स्थानीयलाइ अंकित मुल्यमा रु. १०० प्रिमियम थप्दै प्रति कित्ता रु.२०० का दरले पुन बिक्रीमा ल्याएको छ भने सर्वसाधारणलाइ अंकित मुल्यमा रु. २०० प्रिमियम थपेर प्रति कित्ता रु. ३०० का दरले बिक्रीमा ल्याएको हो ।
इच्छुक लगानीकर्ताले न्युनतम ५० कित्ता देखि अधिकतम बिक्री खुल्ला भएको सबै कित्ता आवेदन गर्न पाउछन । फाल्गुण ६ गतेदेखि निष्काशन बिक्री खुल्ला रहेको शेयर छिटोमा फाल्गुण ९ गते बिक्री बन्द हुनेछ भने माग बमोजिम आवेदन नपरेको खण्डमा चैत्र ५ गतेसम्म बिक्री खुल्ला रहनेछ ।